Wax ku saabsan Muuqaalka Dooxada
Buddhatrends waxaa lagu abuuray Montreal, Canada si ay haweenka uga soo bandhigto adduunka, suurtogalnimada in ay u ekaato dadka kala duwan oo ay si sax ah u muujiyaan habka asalka ah ee ay dharka.
Shirkaddu waxay aaminsan tahay in haweenku ay u qalmaan in ay xiraan qaab kasta oo ay ku xiranyihiin oo ay u helaan si dhakhso ah online.
Buddhatrends sidoo kale waahal-dukaanka-hal-dukaanka oo dhan ee Ruuxyada lacag la'aanta ah waxaa ka jira:farshaxanada, safarrada, Bohemians, Hippies, iyo dumarka oo dhankuwaas oo wax kale ma rabolaakiin ilaa waxay muujiyaan weelkooda wanaagsan iyagoo u maraya qaabkooda gaarka ah.Nolosha bilaashka ah ee naga mid ah ayaa xoriyad u leh wax walba oo aan sameyno, gaar ahaan habka aan u qaadno. Waa maxay habka kale ee wanaagsan ee aad u muujin karto adigaaga runta ah sida aad u lebisantahay iyo sida aad u eegi karto. Buddhatrends ma aha oo kaliya dukaanka Wanderers laakiin tilmaame hab nololeed oo loogu talagalay haweenka casriga ah ee casriga ah ee yaqaan sida loo sameeyo bayaan ay dhab ahaantii doonayaan.
Dhamaan Buddhatrends, waxaanu aaminsannahay xorriyaddaada in aad doorato qaabkaaga, waxaanna qiimaynaa waqtigaada, raaxadaada iyo dabcan, waxaad eegtaa. Sidaa daraadeed, waxaan ku dhufaneynaa adduunka si aan u helno alaabooyinka ugu fiican si aan kuugu darno ururintayada adiga, sheyada kuxirta SPIRITS FREE. Waxyaabaha aan wax ka qabanayno oo kaliya ayaa naga xiiseynaya asalka, kala-jaadnimada, isku-kalsoonaanta, iyo raaxada. Ururadayadu waxay ujeedadoodu tahay inay ballaariso qaababka aad u kala jeceshahay, hase yeeshee marnaba ma arki doontid wax kasta oo u hoggaansan qaabka caadiga ah ee Buddhatrends sababtoo ah waxaannu rumaysan nahay in midnimadaada, in aad mudan tahay xorriyadda doorashada oo adiga kugu xiran inaad abuurto muuqaalka ku haboon shakhsigaaga!
Sida nafta oo lacag la'aan ah nafteena, waa go'aankayaga inaan keeno oo kaliya ugu fiican ee aad.Ku soo dhawow ururintayaga oo ku faraxsanaanta raaxada ee xirxiran oo kala duwan Jaraa'idyada & Qulqulka, foororsasho Plus Dharka Maskaxda, Linen Palazzo Pants iyo qalabka si aad u muujiso midabada saxda ah. Ururadayada si taxadar leh loo soo xulay waa neef-hawo nadiif ah, oo gaar ah oo xoriyad ah sida isweydaarsigaaga runta ah. Buddhatrends waxay ku siineysaa dhar iyo qalab mar walba. Isku qasbo oo cayaar ka samee ood u hesho farsamooyinka xayawaanka xeebta ilaa jidka!
Markaad ka caawiso inaad ku aragto qaabka ugu fiican ee qaabkaada gaarka ah, waxaanu ku dadaalnaa inaanu qof kasta iibino khibrad fiican. Waa mudnaanta koowaad ee aan ku siin karno adeegga macaamiisha aad u fiican, habka ugu dhaqsaha badan ee waxqabadka degdegga ah, waqtiyada maraakiibta macquulka ah, iyo siyaasad dib u celin aan lahayn.
Haddii aad tahay booqo ugu horreysa, waxaan kugu soo dhaweyneynaa si buuxda oo waxaan rajeyneynaa inaad ku farxi doonto dhinac kasta ee khibradaada ganacsiga ee Buddhatrends. Haddii aad tahay taageere joogta ah iyo macaamil soo noqoshada, waxaanu kuugu mahadnaqaynaa taageeradaada iyo kalsoonidaada annaga iyo ururinta alaabooyinka.
Waanu qiimeynaa jawaab-celintaada, haddii taageero ama wax dhisid oo si joogta ah u shaqaynaya si loo hagaajiyo waayo-aragnimadaada ganacsigaaga nala soo xiriir.
Nabad iyo jacayl,
Kooxda Taageerada Taageerada